डेरावालले भाडा नदिँदा कोठाभाडाबाट जीविका चलाउँनेलाई जीविका चलाउन समस्या ! – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
| प्रकासित मिति : २८ असार २०७७, आईतवार ०५:१५
काठमाडौं/कोरोना महामारीको कारण डेलावालमात्र होइन घरबेटीसमेत आर्थिक समस्यामा परेको पाइएको छ । कोठाभाडाबाट जीविका चलाउँदै आएकी काठमाडौं सिनामंगलकी देवकुमारी काफ्लेले डेरावालले छ महिनादेखि भाडा नदिँदा जीविका चलाउन समस्या परेको बताइन् ।
उनको तीन तले घरमा विद्यार्थी, मजदुर र निजी क्षेत्रमा कार्यरत भाडामा छन् । ‘लकडाउनअघि भाडा दिन्छौं भन्थे त्यसपछि कोठामा बस्ने गाउँ गए, अहिले न भाडा दिन्छन् न त कोठा खाली नै गर्छन् ।’ काफ्लेले सुनाइन् । बागबजारमा महिनाको दुई लाख भाडामा कन्सल्टेन्सी चलाउन दिएका महेश थापाको पीडा पनि उस्तै छ । उनले पनि भाडा नपाएको पाँच महिना भयो ।
भाडामा लिने प्रकाश तिमल्सिनालाई सम्पर्क गर्दा मोबाइल अफ गरेर बसेको थापा बताउँछन् । कार्यालयको आवश्यक सामान ४÷५ लाखको होला, भाडा भने १० लाख पुग्न लागेको घरबेटी थापाको बुझाइ छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
पत्रकार अधिकारीले दिए बिहेको भोज गर्ने रकम कोराना कोषमा
अमेरिकाले लगायो टिक टक र वी च्याटमा प्रतिवन्ध ! २८ असार २०७७, आईतवार ०५:१५
बलात्कार कि बार्गेनिङ ? २८ असार २०७७, आईतवार ०५:१५
विधिसम्मत पार्टी सञ्चालन गर्न नेताहरुको माग २८ असार २०७७, आईतवार ०५:१५
गृहकै कर्मचारीद्वारा सशस्त्र प्रहरीका चालकको दुरुपयोग २८ असार २०७७, आईतवार ०५:१५
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान रिपोर्टस् पुरानो लयमा फर्कन नौ महिना लाग्ने २८ असार २०७७, आईतवार ०५:१५
सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ २८ असार २०७७, आईतवार ०५:१५
देशभर कोरोना सङ्क्रमण दर उच्च, उपत्यकामा अझ खतरा २८ असार २०७७, आईतवार ०५:१५
मृगौला पिडित श्रेष्ठद्धारा सहयोगको याचना २८ असार २०७७, आईतवार ०५:१५
प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी धेरै भ्रष्ट २८ असार २०७७, आईतवार ०५:१५
ओली–प्रचण्ड वार्ता : सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमै अडान २८ असार २०७७, आईतवार ०५:१५
लापरवाहीले फैलियो कोरोना २८ असार २०७७, आईतवार ०५:१५
यसरी सल्किँदै छ संक्रमण, स्थिति भयावह बन्दै २८ असार २०७७, आईतवार ०५:१५